Cranberry cocktail: iziphuzo ehlobo
Ucime ukoma ngamanzi, akubona bonke abantu abavumayo. Futhi ngamaholide izingane ukufaka ukubeka into esihlwabusayo ezilingayo. Ngesikhathi ukuphakama berry isizini Olwa for ukuthandwa ubuqhawe kuba cocktail of cranberry. To the best of Ukuthoma, nge ukunambitheka ezithakazelisayo, kubalulekile ukunambitha nasemphefumulweni kokubili ngabantwana nangabantu abadala.
Inketho yokuqala kuthi akufane nokwenzeka ukulungiswa izithelo iyisitshulu kodwa likwazi isakhiwo multicomponent. amajikijolo Okokuqala zigaywa kokuncinyane ushukela; lapho beqala up ijusi, ushukela sengezwe isigamu semali ngesisindo sezinti cranberry. Nyakazisa nge workpiece ibekwe ku umlilo - kodwa musa ubilise! Lapho wonke ushukela uncibilike, isiphuzo elicwengekileyo futhi kuxutshwe ingxenye nge itiye ezinhle oluhlaza. Lokhu cranberry cocktail chilled kahle, acima ukoma. Yebo, futhi imbues umzimba nge amavithamini.
sipho Landelayo okwanelisa kakhudlwana, kodwa akukho esihlwabusayo kancane namavithamini. eyikhulu amagremu amajikijolo zigaywa kahle, ungakwazi pestle ezijwayelekile, blender ukuphula Nokho, yebo, ngokushesha. mass homogeneous kuthululwe isigamu ilitha ukhilimu (lokucuketfwe fat - uma bebona kunesidingo yakho), futhi abashaya kuze Foam Fluffy futhi uzinzile. Izingane ngempela!
Cocktail Landelayo ne cranberry blender - kulabo abacabanga amajikijolo omuncu noshukela e iziphuzo akuyona wamukelekile kakhulu. Ikhishi umsizi ukuxubana cranberry (cishe sasiyikhulu namashumi amagremu) kanye isipuni itiye uju obukhulu. Lapho mass iba bushelelezi, isipikili ubisi emqulwini ka 300 ml, futhi ngokuphindaphindiwe sivuleka blender. Imikhiqizo anele ezimbili izingilazi emnandi kuzo zonke izici isiphuzo.
Ukushisa kuwusizo cocktail emangalisayo cranberry abandayo iresiphi elandelayo.
In a blender ukubeka nezinkezo ezintathu (ungakwazi shelela) amajikijolo.
Lokhu ayethela ezinkulu spoon elderberry isiraphu inqwaba cranberry juice futhi kancane xaxa, cishe 70 ml ephansi fat yogurt.
Of lukalamula endishini ngawakhamela juice; kufanele babe mayelana isipuni.
Cocktail cranberry ngesiswebhu nengxenye emaminithini amabili; ice kulesigaba lingekho.
Boca hayboll selehlile, it is wathela isiphuzo, futhi kuwele ice cubes ezimbalwa kuphela.
Uma ukuxuba cranberry wakhonza ngezinye izikhathi lalibe nesiqalo esihle, ingilazi yewayini kungenziwa ehlotshiswe amajikijolo cowberry kanye sprig Mint fresh. Uma ngosuku kungokwemvelo - ngiphuze.
Cocktail ne cranberry kanye ukhilimu
Lokhu dessert Sifana nabantwana okungaphezulu kakhulu zonke izinguqulo ezandulele cocktail. Futhi ukunambitheka isiphuzo ziyahlukahluka: ngokwesiko ubekwa ice cream, kodwa akukho ezithakazelisayo kancane version vanilla. Chocolate ice cream uyonika simnandi kakhulu, kodwa umbala ukungacaci cranberry cocktail: uma izingane (noma) kungukuthi udidekile, ungazisa ngokuphepha kwakhe ukuhambisa. Ukwenza lula ukulungiselela kungaba pre-ngawakhamela juice amajikijolo. Ngenxa yalokho, i-cocktail nje uthanda bonke abantu, ngisho ezingezwakali, abangathandi juice nge uginindela. A ingilazi juice, elifanayo ubisi kancane chilled-10 igremu bakhonze ice ophehliwe nge mixer. Cranberry cocktail is batheleka izibuko, futhi ngesizotha wamnikela izingane.
Kuyini, iwayini Georgian?
Juice ukuhlakula. zokupheka okuzenzela
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela ukulungiselela kvass ekhaya
Moonshine ayinaphunga, nge ukunambitheka omnene
Ihhotela Holiday International Sharjah 4 *: incazelo, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Wings eyosiwe - ezinye izindlela ezithakazelisayo
Izihlahla hydrangeas entwasahlobo. Ukunakekela hydrangea
I-Kefir yokudla i-Valley
Ukukhweza iphrofayli: zisebenzisa ngokuhlakanipha
Zokudayiswa kwezindlu yesibili: ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo
Kuyini ikhadi igolide Savings Bank
Microphone - kuyinto kudivayisi Electroacoustic. kudivayisi Lesitshalo umbhobho echazwe
Blepharitis: Izimpawu, Yokukwelapha Nokukuvimbela
Ugwayi ne-cigar flavour, noma Ubhema kanjani u-cigarillos?